သီချင်းထဲက ဒဿန – Min Thayt
သီချင်းတွေနဲ့ နေ့တိုင်းလိုလို ကျနော် ထိတွေ့တယ်။ ကျနော်က တေးရေးဆရာတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ တေးသံရှင် အဆိုတော်တစ်ယောက်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဝါသနာရှင် သီချင်းသီဆိုသူလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ် ကျနော့် နှလုံးကြည်မွှေ့ဖို့အတွက်၊ ထိတွေ့ဖြစ်နေတာက ဂီတနဲ့ သီချင်းတွေ။ သီချင်း​​တွေက ကျနော့် အတွေး အခေါ်ကိုလည်း သယ်ဆောင်ခေါ်ငင်ပေးတယ်။ ကျနော့် ခံစားချက်ကိုလည်း နှိုးဆွပေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်ဟာ သီချင်းတွေထဲက ဒဿနတချို့ကို ရှာဖွေမိတယ်။
ကျနော် ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဆီတိုင်းမှာ၊ စွဲငြိတဲ့ စာသားတစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ရှိတယ်။ အဲသည့်ထဲက တချို့ တစ်ဝက်ကို ကျနော် နှိုက်ထုတ်ချင်တယ်။
(၁) နဒီမင်္ဂလာ (ကိုရဲလွင်)
ပူလောင်ကျွမ်းတဲ့ နှလုံးသား ကိုယ့်အသည်းကို….
ဒီသီချင်းဟာ ခင်မောင်တိုး ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းနာမည်က “နဒီမင်္ဂလာ” ဆိုတဲ့ သီချင်းဖြစ် တယ်။ သီချင်းရေးသူက “ကိုရဲလွင်” ။ နဒီမင်္ဂလာသီချင်းထဲမှာ “ပူလောင်ကျွမ်းတဲ့ နှလုံးသား ကိုယ့်အသည်းကို ဟန်ဆောင်နှစ်သိမ့်ထားမယ်လေ…” ဆိုတဲ့ စာသားဟာ ကျနော့်ရင်ကို ထိတယ်။ ရင်ကို ခိုက်တယ်။ နဒီမင်္ဂလာ သီချင်းကို နားထောင်လိုက်တိုင်း၊ ကျနော် အမှတ်ရမိတာတွေ ရှိတယ်။ “ငါ့နှလုံးသားကို ဟန်ဆောင်နှစ်သိမ့်ထား တဲ့ အရာတွေက ဘာတွေလဲ” ဆိုတာပေါ့။ အထူးသဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ကျနော်တို့ ဟုတ်တယ်၊ မှန်တယ်လို့ ထင်မှတ်နေတဲ့ “ဟုတ်ယောင်ထင်မှု” တွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေဟာ ဘယ်လောက်များ များလိမ့်မလဲနော်။ ဘာသာရေး ကလည်း မှိုင်းတစ်ခုလို ကျနော်တို့ကို ဟန်ဆောင်နှစ်သိမ့်ထားနိုင်လိမ့်မယ်။ တချို့သော လူမှုဓလေ့ထုံးတမ်း အတွေးအခေါ်အစဉ်အလာတွေကလည်း ကျနော်တို့ကို မှန်သယောင် ထင်မှတ်ခိုင်းထားလိုက်မယ်။ တခါတရံ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒုက္ခတွေကို၊ ချိုမြိန်ပါတယ်လို့ မှတ်ထင်ခိုင်းထားတဲ့ အယူအဆတွေ၊ အမြင်တွေလည်း ရှိလိမ့်မပေါ့။
ကျနော်တို့ကို ဟန်ဆောင်နှစ်သိမ့်ထားတာတွေက ဘာတွေလဲ။
ကျနော်တို့ကို ချွေးသိပ်ထားတာတွေက ဘာတွေလဲ။
(၂) မြှားဘုရင် (ခင်ဝမ်း)
ဖြူစင်သူတွေ ရှုံးနိမ့်ထွက်ခွာတဲ့ ဘဝ စက်ဝန်းကို …
ချိန်ရွယ်ပါလေ…. အို ၊ မြှားဘုရင်
အရိုးသားဆုံး မြှားတစ်စင်းကို အဝေးဆုံး ပစ်လွှတ်ဖို့….
မူရင်းသီချင်းက ခင်ဝမ်းရဲ့ သီချင်းပါ။ နောက်ပိုင်းတော့ ခင်မောင်တိုး ပြန်ဆိုထားတယ်။ သံစဉ်နဲ့ စာသားကလည်း ခင်ဝမ်းကိုယ်တိုင် ရေးစပ်ထားတဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းနာမည်က “မြှားဘုရင်” တဲ့။ မြှားဘုရင်သီချင်းထဲမှာ၊ “ဖြူစင်သူတွေ ရှုံးနိမ့်ထွက်ခွာတဲ့ ဘဝစက်ဝန်း” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ “အရိုးသားဆုံး မြှားတစ်စင်းကို အဝေးဆုံး ပစ်လွှတ်ဖို့” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ ကျနော့် ရင်ကို အခိုက်ဆုံးပဲ၊ အထိဆုံးပဲ။ မြှားဘုရင်သီချင်းကို နားထောင် လိုက်တိုင်း၊ ကျနော့် အတွေးမြင်ကွင်းထဲမှာ ရိုးသားသူတွေ၊ ဖြူစင်သူတွေ၊ ဖြောင့်မတ်သူတွေဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရှုံးနိမ့်စွာ ထွက်ခွာရတဲ့ ပုံရိပ်တွေက ပြေးနေတာတွေ့ရတယ်။ တကယ့်လောကကြီးဟာ ကျနော်တို့ တွေးထင် ထားတာနဲ့ ပြောင်းပြန်ပါ့လားလို့ ကျနော်ကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ သတိရစေခဲ့တယ်။ ရိုးသားသူတွေကို ကြည့်လိုက်၊ ဖြူစင် သူတွေကို ကြည့်လိုက်၊ ဖြောင့်မတ်သူတွေကို ကြည့်လိုက်။ သူတို့တတွေဟာ ဘဝလောကထဲမှာ အနိုင်ရကြတာ သိပ်ရှားတယ်။ နေရေးထိုင်ရေးမှာလည်း ချို့ချို့ငဲ့ငဲ့ပဲ။ မွဲမွဲတေတေပဲ။ ဆင်းဆင်းရဲရဲပဲ။ မရိုးသားသူ၊ မဖြောင့်မတ်သူ၊ ဖျန်ကျသူတွေသာ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားကြတဲ့ လောကကြီးကို ကျနော် တွေ့ရတယ်။ ဒါဟာ တကယ့် အဖြစ်ပါ့ လားလို့ မြှားဘုရင်သီချင်းက ကျနော့်ကို ခဏ ခဏ သတိပေးနေတယ်။
(၃) မြတ်သောအကျင့် (ကိုနေဝင်း)
ရိုးသားခြင်း၌ ဆင်းရဲ ငါ့ဘဝ ရှိပါစေ…. သူငယ်ချင်း
ငါသည် မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်၍
မြေမှာ ရပ်၍ နေ၏….
သီချင်းနာမည်က ခိုင်ထူးဆိုထားတဲ့ “မြတ်သောအကျင့်” ဆိုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို ရေးတာက၊ ကိုနေဝင်း ရေးတာ။ မြတ်သောအကျင့် သီချင်းကို နားထောင်လိုက်တိုင်း “ရိုးသားခြင်း၌ ဆင်းရဲ ငါ့ဘဝ ရှိပါစေ” ဆိုတဲ့ စာသားက၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော့်ကို တဖွဖွ သတိပေးနေခဲ့တယ်။ ငါ ဆင်းရဲချင် ဆင်းရဲပါ စေ။ ရိုးသားမယ်။ လျှာပေါ် မြက်ပေါက်ချင် ပေါက်နေပါစေ… ကိုယ်ကျင့်တရားကိုတော့ မချိုးဖောက်ဘူးဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက်ဟာ ကျနော် လျှောက်တဲ့လမ်းကို၊ ပိုလို့ ဖြောင့်စေခဲ့တယ်။ မတ်စေခဲ့တယ်။ သီချင်းစာသား ထဲမှာ၊ “မြေမှာ ရပ်၍ နေ၏” ဆိုတဲ့ စာသားပါတယ်နော်။ အဲသည့် စာသားဟာ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခြင်းကို ပြနေတယ်လို့ ကျနော် ထင်တယ်။ ဒီလူဟာ ရိုးသားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆင်းရဲတယ်။ သို့ပေမယ့် ကိစ္စ မရှိဘူး။ သူဟာ ဆင်းရဲပေမယ့် မြေပေါ်မှာ ပုံလဲကျနေသူ မဟုတ်ဘူး။ မြေပေါ်မှာ မတ်မတ် ရပ်နိုင်သူလို့ ပြောတာ။ ခိုင်ထူးရဲ့ မြတ်သောအကျင့် သီချင်းဟာ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော့်ကို လက်သီးဆုပ် မဖြည်ဖို့နဲ့ မာကျောကြံ့ခိုင်စွာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အမြဲ တွန်းအားပေးနေခဲ့တယ်။
(၄) အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ရမယ် (ကိုနေဝင်း)
နွေကန္တာ…. ခရီးကြမ်းတွေ ဆူးခင်းလမ်း
ဪ… တစ်နေ့တော့ ၊ အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ရမယ် ….
သီချင်းနာမည်က ခိုင်ထူးဆိုထားတဲ့ နာမည်ကျော် သီချင်းတွေထဲက တစ်ပုဒ်။ “အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ရမယ်” တဲ့။ ရေးတဲ့သူကလည်း “ကိုနေဝင်း” ပဲ ရေးတာ။ သီချင်းမှာ အားပါတယ်။ မာန်ပါတယ်။ ခိုင်ထူးက သီချင်းဆိုရင် အာလုတ်သံကြီးနဲ့ အားပါးတရ ဆိုတတ်တယ်။ ဒါကို သိပ်ကြိုက်တာပဲ။ ခင်မောင်တိုးက ဒဿနပါတဲ့ သီချင်းတွေကို သိမ်မွေ့စွာ ဆိုတတ်တယ်။ ခိုင်ထူးကတော့ အားနဲ့ မာန်နဲ့ ကြုံးဝါးသလို ဆိုတတ်တယ်။ သိမ်မွေ့ပြီး ကိုယ်ခံအားပါ တဲ့ ခင်မောင်တိုးရဲ့ သီချင်းတွေက ကျနော့်အတွက် ခွန်အားဖြစ်သလို၊ ခိုင်ထူးရဲ့ မာန်နဲ့ ထန်နဲ့ ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေ ကလည်း ကျနော့်ကို ခွန်အားတွေ ပေးတယ်။ အဲသည့်အထဲက “အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ရမယ်” သီချင်းကတော့၊ ကျနော့်ကို အခက်အခဲတွေ ခရီးကြမ်းတွေကို ကျော်နိုင်အောင်၊ ဖြတ်နိုင်အောင် ခွန်အားအဖြစ် တွန်းအားပေးခဲ့ဖူး တယ်။ ခရောင်းတောနက်တွေ၊ နွေကန္တာ ခရီးကြမ်းတွေ၊ စိတ္တဇညတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ရှိရှိ တစ်လှမ်းချင်း လှမ်း မယ်။ တစ်နေ့တော့ ကျော်နိုင်ရမယ်။ အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ရမယ်။ မရောက် ရောက်အောင် သွားမယ်။
(၅) အပေးအယူ (စိုင်းခမ်းလိတ်)
ထိုက်တန်တဲ့ ရင်းနှီးမှုတော့ ရှိရမယ်…..
မယုတ်မလွန်တဲ့ ကြိုးစားမှုတော့ စိုက်ရမယ်….
နတ်စီတဲ့ အိပ်မက် လှလှများ….
လွယ်လွယ်နဲ့ မရ… မရ…
သီချင်းနာမည်က “အပေးအယူ” တဲ့။ သီချင်းရေးတဲ့သူက ဆရာ “စိုင်းခမ်းလိတ်”။ စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးရင် ဘယ်သူ ဆိုသလဲဆိုတာ အားလုံး သိပြီးသား။ စိုင်းထီးဆိုင် ဆိုတဲ့သီချင်း။ နောက်တော့ “ဘိုဖြူ” လည်း ထပ်ဆိုတယ်။ သီချင်း နာမည်ကိုက “အပေးအယူ” တဲ့။ အဲသည့်သီချင်းထဲက “ထိုက်တန်တဲ့ ရင်းနှီးမှုတော့ ရှိရမယ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးက တော့၊ ဘယ်အရာမှ အလကားမရဘူး။ ထိုက်တန်တဲ့ ရင်းနှီးမှုရှိရမယ်၊ မယုတ်မလွန်တဲ့ ကြိုးစားမှု တစ်ခုတော့ ရှိကို ရှိရမယ် ဆိုတာကို ပြောတယ်။ နတ်စီတဲ့ အိပ်မက်လှလှတွေဟာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဘယ်တော့မှ မရဘူးတဲ့။ ကျနော်ဟာ တစ်ခုခုကို လိုချင်လို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ “ငါ့အားထုတ်မှုဟာ လုံလောက်တဲ့ အားထုတ်မှု ဖြစ်ရဲ့လား” လို့ ခဏ ခဏ မေးနေဖြစ်အောင်၊ ဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ သီချင်းက ကျနော့်ကို ခဏ ခဏ နှိုးဆွပေးတယ်။ ဘယ်အရာ ကိုမှ အလကား မလိုချင်ရအောင် ဒီသီချင်းက ကျနော့်ကီု တဖွဖွ သတိပေးနေတယ်။
(၆) ကြိုးကြာသံ (ကိုမောင်မောင်)
သီချင်းနာမည်က “ကြိုးကြာသံ”။ တေးရေးက “ကိုမောင်မောင်”။ ဆိုတဲ့သူက “ကိုတိုးကြီး” (ခင်မောင်တိုး)။ မိုင်ထောင်ချီ ပျံသန်းနိုင်ဖို့၊ ကြိုးကြာငှက်တွေဟာ ဘယ်လို အားစိုက်ပျံသန်းကြရသလဲဆိုတာကို ဘဝဒဿနနဲ့အတူ ကျနော့်ကို ခွန်အားတွေ ပေးခဲ့တယ်။ ကြိုးကြာသံ သီချင်းထဲမှာ “အများနည်းတူ သက်လုံ မကောင်းရင်၊ မွေးဖွားရာ အရပ်ဆီ မိုင်ထောင်ချီပျံနေရင်း ကြိုးကြာငှက်တချို့လေ ချီလာစဉ် ကျန်ရစ်ပြီ” ဆိုတဲ့ သီချင်းက၊ ကျနော့်ကို သက်လုံကောင်းအောင် လေ့ကျင့်ဖို့ တွန်းအားပေးတယ်။ မိုင်ထောင်ချီ ခရီးမှာ ကျန်ရစ် မဖြစ်ချင်ဘူးလေ။ နောက်ပြီး ကြိုးကြာသံသီချင်းမှာ အရှုံးနဲ့ အောင်မြင်ခြင်းဟာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အားနဲ့ မာန် ရှိမှသာလျှင် ဖြစ်မယ်လို့ ပြောတယ်။ မိုင်ထောင်ချီ ခရီးကို ခရီးဆုံးထိ ရောက်အောင် လှမ်းနိုင်ဖို့၊ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အားမာန်နဲ့ သက်လုံကို ဖြည့်တင်းဖို့၊ ကြိုးကြာသံ သီချင်းက ကျနော့်ကို တဖွဖွ သတိပေးနေခဲ့တယ်။
(၇) တန်ဖိုး (လေးဖြူ ၊ အငဲ)
တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကြတော့ နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့နဲ့
အရာရာဟာ တစ်ပိုင်းတစ်စ ….
လွယ်လွယ်တွေးပြီး ဖြစ်သလို နေခဲ့တော့ ….
နေသလိုသာ ဖြစ်ခဲ့ပြီ …
တန်ဖိုးဆိုတဲ့ သီချင်းကို ကိုလေးဖြူက ဆိုတယ်။ ရေးတဲ့သူက လေးဖြူနဲ့ အငဲ။ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်။ ဒီသီချင်းကို လည်း ထပ်ခါ ထပ်ခါ နားထောင်နေတာ ကြာပြီ။ သီချင်းထဲမှာ အချိန်ကို တန်ဖိုးထားဖို့ကို နှိုးဆော်တယ်။ အဲသည့် ထဲက စာသားကတော့ ကျနော့် ခေါင်းထဲ အမြဲ စွဲနေတယ်။ “တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကြတော့ နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့နဲ့ အရာရာဟာ တစ်ပိုင်းတစ်စ” တဲ့။ ငယ်စဉ်တုန်းကတည်းက အဖေက ကျနော်တို့ကို ပြောဆိုဆုံးမရင်၊ ဒါလေး အမြဲတမ်းလိုလို ထည့်ပြောဖူးတာလည်း သတိရတယ်။ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်မယ်ဆိုရင်၊ နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့ မလုပ်နဲ့ကွ။ ချက်ချင်းလုပ်။ အခုလုပ်။ စသည်ဖြင့် ပြောတတ်တယ်။ ကျနော်ဟာ ကိုယ်လုပ်မယ့်အလုပ်တစ်ခုကို ဖင်လှည့်ခေါင်းလှည့်နဲ့ နေ့ ရွှေ့ ညရွှေ့ လုပ်နေပြီလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားမိရင်၊ ကိုလေးဖြူရဲ့ တန်ဖိုး သီချင်းထဲက စာသားတွေကို သတိရမိ တော့တာပဲ။ ကျနော်တို့ လုပ်နေတာတွေကလည်း များသောအားဖြင့် တိုးလို့တန်းလန်းတွေနဲ့ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စ ဖြစ်နေတာတွေ များတယ် မဟုတ်လား။
(၈) သံသရာခရီးသည် (မြို့မဦးဘိုခင်)
အနမတဂ္ဂ ဘဝတွေမယ် ….
ငြိလာတဲ့ သံယောဇဉ်က တွယ်….
မာမာအေး ဆိုတဲ့ သံသရာခရီးသည် သီချင်းဟာ ကျနော် ထပ်ခါထပ်ခါ နားထောင်တဲ့ သီချင်းတွေထဲက တစ်ပုဒ်။ ဘဝသံဝေဂအမြင်ကို ဒီသီချင်းကနေ ကျနော် ရခဲ့ဖူးတယ်။ အထူးသဖြင့် သီချင်းရဲ့ အစဖြစ်တဲ့…. “ကာမဘုံသား ဆုံလည်နွား” ဆိုတဲ့ ဥပမာအလင်္ကာ အသုံးဟာ ၊ သိပ်ထိမိတယ်။ လူတွေဟာ ဆုံလည်နွားလိုပဲလို့ လယ်တီဆရာ တော်ကြီးကလည်း ဟောဖူးတယ်၊ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကလည်း ဟောဖူးတယ်။ အဝိုင်းပြေးပြေးနေတဲ့ လူ့ဘဝ ပါတကား။ ဘယ်တော့များမှ ဆုံးနိုင်တော့မလဲဆိုတဲ့ သံဝေဂအမြင်ကို ရတယ်။ သားတွေ သမီးတွေ၊ ဇနီးတွေနဲ့ ငြိလာတဲ့ သံယောဇဉ်တွေကြောင့် မရုန်းနိုင်၊ မထွက်နိုင်။ မြဲခိုင်လှတဲ့ သံသရာ ခရီးသည်ပါ့လား။ ဘယ်တော့များမှာ ဆုံးမှာလဲ။ ဒါဟာ ဝဲလိုပဲ။ လည်နေတယ်။ နောက်တော့ မြုပ်သွားတယ်။ နစ်သွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘဝဟာ မွေးလိုက် သေလိုက်၊ ဘဝသစ်တဖန် မွေးဖွားလိုက်။ ဘဝ သစ်မှာ ခန္ဓာသစ်နဲ့ ဒုက္ခသစ်ကို ခံစား၊ သုခသစ်မှာ ပျော်ပိုက် မေ့မျော။ ဒီလိုနဲ့ သံသရာဝဲဩဃမှာ ကျင်လည်လိုက်တာ၊ အနမတဂ္ဂဘဝတွေပါ့လား။ မဆုံးနိုင်တော့ပါ့လား။
(၉) ဘဝသံသရာ (မန္တလေးဦးဘသိန်း)
ဘဝ သံသရာ…. ရှည်လျား ထွေပြား မနေမနား
ခရီးပန်းတိုင် မရောက်မချင်း တစ်ယောက်ဆင်း တစ်ယောက်တက်
ဘဝသံသရာ သီချင်းကို ဆိုတဲ့ သူက ဆရာကြီး ဦးသုခ။ သီချင်းရဲ့ အစမှာ မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို သံဝေဂအမြင်ရအောင် ခံစားရစေတယ်။ ဘဝသံသရာဟာ ရှည်လျားလွန်းလိုက်တာ။ ထွေပြား ရှုပ်ထွေးမှုလည်း များလိုက်တာ။ မနေ မနား မရပ်မနားနဲ့ အဆက်ပြတ်သည်ရယ်လို့ မရှိ။ ရပ်နားသည်လို့ မရှိ။ အမြဲတမ်း တစ်သွား တည်း သွားနေကြတယ်။ ခရီးပန်းတိုင်ဆိုတာလည်း တောင်တက်သလိုပဲ၊ တစ်တောင်တက်ပေမယ့် နောက်ထပ် တစ်တောင် ကျန်နေသေးတယ်။ တစ်တောင်ပေါ် တစ်တောင်ဆင့် တောင်အမြင့် ပတ်ခြံရံနေသလိုပဲ။ ဘဝခရီးဟာ မြို့ပတ်ရထားကြီးလိုပဲ အစဉ်လည်ပတ်နေတာလည်း တွေ့ရတယ်။ ခရီးပန်းတိုင်လို့ ထင်ရတဲ့ ဘူတာကို ဆင်းသွား ပေမယ့်၊ တစ်ယောက်ဆင်း တစ်ယောက်တက် ဆက်လက် ထွက်ခွာလာ။ ဘယ်တော့များမှ မဆုံးနိုင်တဲ့ ဘဝ သံသရာ။
၁၆၊ မတ်၊ ၂၀၂၂။
Tagged Art, Music, Social Culture, Society
Previous post ဗမာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက မဟာခေါင်းဆောင်ကြီးဝါဒ
Next post ကျနော် ဘာကြောင့် စာရေးသလဲ